Janaraal Moorgan oo si diiran loogu soo dhaweeyay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandJanaraal Moorgan oo si diiran loogu soo dhaweeyay Garoowe
Janaraal Moorgan oo si diiran loogu soo dhaweeyay Garoowe
April 20, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Boqolaal qof ayaa saf u galay waddooyinka si ay u soo dhaweeyaan Janaraalka. [Xigashada Sawirka: Puntland Post]
Garoowe-(Puntland Mirror) Janaraal Maxamed Siciid Xirsi Moorgan ayaa maanta oo Jimce ah si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.
Boqolaal qof ayaa saf u galay waddooyinka si ay u soo dhaweeyaan Janaraalka.
Arbacadii, isaga oo ku sugan magaalada Boosaaso, Moorgan ayaa ku dhawaaqay in uu yahay musharax u tartamaya doorashada madaxweynenimada Puntland ee sanadka 2019.
Moorgan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladdii dhexe ee Madaxweyne Maxamed Siyaad Bare ayaa tan iyo markii la dhisay sanadkii 1998-dii aan ku lug laheyn siyaasada Puntland, oo ah halka uu kasoo jeedo.
Madaxweyne Cabdiweli oo markale ku celiyay in ciidamada PMPF oo uu Imaaraatku taageero ay laf dhabar u yihiin ammaanka Puntland
In ka badan 300 oo macalimiin ah oo ka qalinjabiyay kulliyada tababarka macalimiinta GTEC
Garoowe-(Puntland Mirror) In kabadan 300 oo macalimiin ah ayaa maanta oo Isniin ah ka qalinjabiyay kulliyada macalimiinta ee Garoowe “GTEC”. Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali, wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Yuusuf Ciise, xildhibaano iyo marti [...]